farqiga u dhexeeya nooca leh GPS iyo nooca leh GPS + Cellular | Wararka IPhone
Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah su'aalahaas in badan oo ka mid ah dadka khibrada yar u leh adduunka ee tikniyoolajiyadda iyo gaar ahaan Apple ay weydiin karaan, waana taas sababta aan uga jawaabi doonno sida ugu macquulsan ee ku saabsan Waa maxay farqiga u dhexeeya nooca leh GPS iyo nooca leh GPS + Cellular?
Waxaan isla markiiba dhihi karnaa gabi ahaanba moodooyinka Apple ay maanta suuqgeyneyso illaa inta Apple Watch ka walaacsan yahay, waxay leeyihiin GPS. Taasi way fiicantahay maadaama aan heli karno shaqooyin xiiso leh oo ay ugu mahadcelinayaan tikniyoolajiyaddan iyo iPhone-keena isku xiran.
1 Muxuu GPS dhab ahaan uga dhigan yahay Apple Watch?
2 Maxay dhab ahaan uga dhigan tahay haysashada GPS + Qalabka gacanta?
Muxuu GPS dhab ahaan uga dhigan yahay Apple Watch?
Tiknoolajiyaddan lagu daray Apple Watch waxay noo oggolaaneysaa inaan sameyno ficillo sida dirista iyo helitaanka farriimaha, ka jawaabidda wicitaannada iyo helitaanka ogeysiisyada markii aan taleefankayaga iPhone-ka ku xirnayn saacadda oo loo maro Bluetooth iyo Wi-Fi. Taas waxaa sii dheer, GPS-ga isku dhafan ee aan ku haysanno Apple Watch wuxuu u shaqeeyaa iyada oo aan loo baahnayn iPhone-ka ku xiran si loogu duubo codsiyada waxqabadka fogaan fog, xawaaraha iyo safarka aan sameyno marka aan jimicsiga sameyno.
Maxay dhab ahaan uga dhigan tahay haysashada GPS + Qalabka gacanta?
Waxa ugu fiican ee tiknoolajiyadani waa marka lagu daro duubista dhaqdhaqaaqa jirka sida aan ku sameyno inta ka hartay moodellada shirkadda Cupertino, Apple Watch oo leh GPS + Cellular ayaa noo oggolaaneysa inaan dirno oo aan helno farriimo, dhammaan noocyada ogeysiisyada riixa, ka jawaab celinta soo socota wicitaanada, helitaanka ogeysiisyada, dhageysiga Apple Music iyo Podcasts Apple (waxay kuxirantahay wadanka) looma baahna inaad sidato iPhone-ka.
Marka waxaan dhihi karnaa waxay siineysaa madaxbanaanida lagama maarmaanka u ah saacadda lambarka taleefankeena si aan uga tagno iPhone guriga. Hal sano kadib doorashadan ayaa laga heli karaa waddankeenna mahadsanid wadahadaladii udhaxeeyey Apple iyo hawlwadeenada Orange iyo Vodafone. Waqtigaan la joogo waxay yihiin labada hawl wade ee adeeggan u fidin doona adeegsadayaasha Apple Watch GPS + Cellular, in muddo ahba waxaa hubaal ah in kuwa kale ay ku biirayaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Waa maxay farqiga u dhexeeya nooca leh GPS iyo nooca leh GPS + Cellular?
Waxaan ku shaqeeyaa banaanka mana jecli inaan lacag ka qaato iPhone-kayga, saacadda tufaaxu aad ayey waxtar u leedahay
Jawaab JAVIER HERNANDEZ GUZMAN
Waa maxay masaafada ugu badan ee taleefanka ficilku waa inuu ahaadaa iyada oo aan lahayn shabakadda Wi-Fi, iyadoo ay ugu wacan tahay isku xirnaanta Bluetooth?
yt .marat 292 dijo
Runtii waan jeclahay astaanta tufaaxa, hadaad mid rabto, waxaan ku kalaxixi doonaa koontadayda instagram, haddii aad rabto inaad i raacdo oo aad toos ii soo dirto, waan kaaga jawaabi doonaa @ yt.marat292
Macluumaad aad u faa'iido badan. Mahadsanid
Ku jawaab Encarni
Waxaan kaliya ka iibsaday saacad tufaax ah amazon, gaar ahaan taxanaha 4 oo leh taleefanka gacanta, laakiin taleefanka aan haysto waa huawei 20 pro. Saacaddaydu waxay ku shaqayn doontaa telefoonkaas.Waxaan ahay qof 72 jir ah oo xitaa markaan isku dayo inaan la socdo wixii ku saabsan, runta ayaa ah inaanan fahmin wax badan.
Haddii qof i caawin karo waan ku qanacsanahay.
saacaddu waxay imaan doontaa Axadda 18-keeda
Hello Agustin. Ilaa iyo hadda saacadaha Apple kuma jaan qaadi karaan nidaamyada hawlgalka ee Android.
NFC-da iPhone XS, XS Max iyo XR waxyar baa furan